မြင်ကွန်းမြို့ဟောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
မြင်ကွန်းမြို့ဟောင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့် ရှေးဟောင်းမြို့တစ်ခု ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကျေးရွာ ၁၀ ရွာပါဝင်သော တိုက်နယ်အဆင့် ဖြစ်ကာ အိမ်ခြေ ၁၄၀၀ ခန့်နှင့် လူဦးရေ ၅၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်က မြင်ကွန်းမင်းသား အပိုင်စားရသော မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 20°00′38″N 95°01′06″E﻿ / ﻿20.0104315°N 95.0182307°E﻿ / 20.0104315; 95.0182307
မြင်ကွန်းမြို့သည် အနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ကင်းမြို့ ၄၃ မြို့တွင် ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်းပိုင်း ၁၈၁၉ ခုနှစ်မှ ၁၈၈၅ ခုနှစ်အထိ ထင်ရှားခဲ့သော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး မြို့ဝန်ရုံးစိုက်ခဲ့သည်။ မြင်ကွန်းမြို့တွင် ပုဂံခေတ် စောလူးမင်းသည် ယာယီမြို့နန်းတည်ဆောက်ကာ ကျုံး၊ မြို့ရိုးတို့နှင့် စံစားခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲအပြီး ၁၈၆၈ တွင် မြင်ကွန်းမြို့သည် ခြောက်မြို့ဝန် ဝန်စုပါမြို့နယ်ဖြစ်ပြီး မြင်ကွန်းမြို့ဝန်ကို မြင်ကွန်း၊ တောင်ခွင်၊ ပဌာနဂိုရ် သုံးမြို့ဝန်ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် မကွေးမြို့ဝန် မစ္စတာဝှီးလ်သည် မြင်ကွန်းမြို့ကို စနစ်တကျမြို့ကွက်ချ၍ ရပ်ကွက်ခြောက်ကွက်ဖြင့် မြို့ကွက်ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
မြင်ကွန်းမြို့သည် မကွေး-တောင်တွင်းကြီးလမ်းမှ လမ်းခွဲကာ ခုနှစ်မိုင်ခန့် သွားရသည်။ မကွေးမြို့မှ ကားလမ်းဖြင့် ၂၃ မိုင်အကွာ၊ ရေလမ်းဖြင့် ၁၀ မိုင်အကွာ တွင် တည်ရှိသည်။
မြင်ကွန်းမြို့ဟောင်းတွင် ပုဂံခေတ်လက်ရာ စေတီပုထိုး၊ ဂူကျောင်း ကျောက်စာများ တည်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် စေတီပုထိုးဂူကျောင်းများ ၆၀ ခန့်ကျန်ရှိသည်။ ထင်ရှားသော စေတီနှင့် ကျောင်းများမှာ လေးဆူစံရာဘုရား၊ လေးမျက်နှာဘုရား၊ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏဂူ၊ ကုလားကျောင်းဂူပျက်၊ ရဟန္တာသိမ်ဘုရား၊ မုန့်ပေါင်းသည် ညီအစ်မဘုရား၊ ရွှေနန်းပေါက်ဘုရား၊ ငါးမျက်နှာစေတီ၊ ကွမ်းထမ်းညီနောင်ဘုရား စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ သုတ (၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄)။ မြင်ကွန်းမြို့ဟောင်းမှ ပုဂံခေတ်ပြိုင်စေတီများ။ မြဝတီ။ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၅ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ ၂.၀ ၂.၁ မကွေးလှမြင့် (၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆)။ မြင်ကွန်းမြို့ဟောင်းသို့ ဘုရားဖူးများ လာရောက်လျက်ရှိ။ ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်။ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၅ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ပါမောက္ခဦးကျော် (မကွေးတက္ကသိုလ်) (၁၉၇၇). "အောက်ဖြစ်စဉ်အကြောင်း သမိုင်း (၁၈၁၉-၁၈၈၅) စာတမ်း".
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြင်ကွန်းမြို့ဟောင်း&oldid=640327" မှ ရယူရန်
၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။